KONKE MALUNGA NOTSHINTSHO LWAMAGAMA ENEW MEXICO - UBOMI BOMTSHATO
Eyona Ubomi Bomtshato Isikhokelo sokutshintsha igama lakho eNew Mexico
Isikhokelo sokutshintsha igama lakho eNew Mexico
I-NM inokubizwa ngokuba nguMhlaba wobugqi, kodwa inkqubo yokutshintsha kwegama isemthethweni ingaziva nantoni na kodwa iyonwabisa. UAlicia Lucia ufota
U-Elena wenza umxholo weempapasho ezahlukeneyo kunye noshicilelo lwedijithali, kubandakanya i-Knot, The Bump, Parents, Real Simple, and Good Housekeeping.
U-Elena wayengumhleli wemitshato owayesakuba nezikhundla kwi-Modern Bride ne-Bridal Guide kwaye waba negalelo kwi-Knot Ultimate Wedding Lookbook.
U-Elena okwangoku nguMhleli oPhezulu weHappify Health, umhlohli odibeneyo weYunivesithi yasePace, umbhali ozimeleyo, kunye nomxholo ...
Ukuhlaziywa ngoMeyi 21, 2020 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Ukutshintsha igama lakho emva komtshato ? Utshintsho lwamagama eNew Mexico luza nemigaqo ethile, ngokusekelwe kuyo yonke into esuka kwisihlobo sakho somtshato kwisitshixo sakho sokutshintsha igama. Apha, sichaza onke amanyathelo aphambili ukuze ubhiyozele i-moniker yakho entsha kwangoko.
Ewe, ukuba uyifunda yonke le nto kwaye ucinge, 'Wowu, kuninzi,' sineendaba ezimnandi: Kukho uncedo olongezelelekileyo olukhoyo lokuthatha uxinzelelo. I-HitchSwitch, inkonzo yokutshintsha igama, ingenza inkqubo malunga namawaka alula ngokulula. Gcwalisa ifom enye enye kwiwebhusayithi, kwaye iqela leHitchSwitch liyakuthatha apho. Uyakufumana onke amanye amaphepha owafunayo ugcwalise ngokuzenzekelayo usebenzisa ulwazi olunikezeleyo. Kwaye uya kufumana imiyalelo ebhalwe ngokwenkcukacha ebonisa indlela yokungenisa.
Konke malunga nokutshintsha igama lakho emva komtshato kwi-NM:
Uyifumana njani iLayisensi yoMtshato eMexico eNtsha
Ulufaka njani uxwebhu lwegama eliguqula iNew Mexico
Ungalitshintsha njani igama lakho kwikhadi lakho lokhuseleko loluntu
Ungalitshintsha njani igama lakho kwiPasipoti yakho
Ungalitshintsha njani igama lakho kwilayisensi yakho yokuqhuba yaseMexico
Ugqiba njani ukutshintsha igama lakho eNew Mexico
Isinyathelo sokuqala ekutshintsheni igama eNew Mexico emva komtshato kukufumana ilayisenisi yomtshato. Kungenxa yokuba, kwiimeko ezininzi, ukuba noxwebhu olusemthethweni kuyenza inkqubo icace ngakumbi.
Ukufumana iphepha-mvume lomtshato kumsitho weNM, unokulandela le miyalelo ingezantsi. Ukuba ubopha iqhina kwindawo eyahlukileyo, jonga phezulu kwilayisenisi yomtshato yaloo ndawo. Nika ingqalelo ukuba kufuneka ubhengeze igama lakho elitsha kwisicelo sakho ukuze wenze utshintsho olwenziweyo emva komtshato. Ukuba kukho indawo yokuyibhengeza kwaye awunayo, kuya kufuneka ufake isicelo enkundleni sokutshintsha igama. (Sichaza le nkqubo kwangaphambili.) Ukuba iapps ifuna nje amagama akho ngaphambi kwexesha, kuya kufuneka ubenakho ukusebenzisa isatifikethi somtshato esikhokelela kwinto 1) thatha ifani yeqabane lakho okanye 2) dibanisa iifani zakho ezimbini (ngaphandle okanye ngaphandle iqhagamshela ).
Iindleko zomndilili ophakathi
Ngawaphi amaxwebhu uwafunayo?
Intloko kwiofisi kamabhalana wenkundla kunye neqabane lakho elizayo ukuze ugcwalise isicelo. Kuya kufuneka unikeze ubungqina beminyaka yakho kunye nesazisi-ilayisensi yokuqhuba okanye isazisi sikarhulumente kufuneka senze ubuqhetseba. Ezinye izithili zinokufuna ubungqina benombolo yakho yoKhuseleko lweNtlalo, nokuba lelakho ikhadi loKhuseleko lweNtlalo okanye iW2, ke jonga kwiofisi kamabhalana wakho kwangaphambili ukuze wazi zonke iimfuno.
Ingaba ibiza malini?
Iindleko zelayisensi yomtshato eNew Mexico zingahluka kancinane nge-county, kodwa ngokubanzi sifumanise ukuba babiza imali eyi- $ 25.
Izinto ezibalulekileyo ekufuneka uzikhumbule:
Ukuze utshintshe igama lakho eNew Mexico emva komtshato, udinga ubungqina bokuba utshatile ngokusemthethweni. Kulapho iphepha-mvume lomtshato lingena khona Inyathelo lokuqala ulifaka isicelo ngaphambi komhla omkhulu. Isinyathelo sesibini kukuyigcwalisa emva kokutshintsha izifungo. Nje ukuba ugqibile, uyakufumana umtshato isatifikethi oya kuyisebenzisa ukufumana igama elisemthethweni kuLawulo loKhuseleko loLuntu.
Kukho amaxesha apho igama elisemthethweni litshintsha eNew Mexico lifuna umyalelo wenkundla endaweni yesatifikethi somtshato. Imizekelo ibandakanya ukudala igama elitsha lokugqibela (njengoMnu. Johnson noMnu.Smith baba ziiJohnsmiths) okanye batshintshe igama lakho. Ngelishwa, oku kongeza ixesha elongezelelweyo (kunye namakhulu eedola) kwinkqubo yokutshintsha igama, ke kuya kufuneka ujonge kathathu ukuba yinto ekufuneka uyenzile. Ingcebiso yepro: Ukuba uthumela i-HitchSwitch ifoto yesatifikethi sakho somtshato, iingcali zayo zinokukuxelela ukuba ungasisebenzisa na kutshintsho lwegama olifunayo.
Ngaba uyazi ukuba ufuna umyalelo wenkundla? Fayilisha uxwebhu lwesikhalazo sakho kwinkundla yesithili kwindawo ohlala kuyo. Le webhusayithi iqhutywa ngurhulumente ichaza Igama elitsha laseMexico litshintsha imithetho , kodwa ungasoloko uqhagamshelana nenkundla yakho ukufumana ulwazi oluthe kratya. Nje ukuba ufumane iodolo esayiniweyo, uya kuyisebenzisa ukutshintsha igama lakho ngokusemthethweni kwi-SSA.
Emva kokuba uthe 'ndiyayenza' okanye ijaji ikunike igama lakho ukuba litshintshe, lixesha lokuba uhlaziye elo khadi loKhuseleko lweNtlalo. Oku kwenza ukuba ifani itshintshe ibe ngurhulumente. Ukufumana iskoop epheleleyo, jonga ii-SSA's imiyalelo yokufumana ikhadi elilungisiweyo , kodwa sichaze iinkcukacha eziza kufuna ukwazi apha ngezantsi.
Gcwalisa Ifom SS-5 , isicelo sekhadi loKhuseleko lweNtlalo. Kuya kufuneka unikezele:
Incwadi yakho yokutshintsha igama (isatifiketi somtshato okanye umyalelo wenkundla)
Ubungqina besazisi (iphepha-mvume lakho lokuqhuba okanye isazisi sikarhulumente kufanele ukuba sanele)
Ubungqina bokuba ngummi ukuba awukabuniki i-SSA (isatifikethi sakho sokuzalwa okanye ipasipoti iyasebenza)
Thumela ngeposi okanye uze namaxwebhu akho kwi-ofisi yeSSA ekufutshane nawe. ( Fumana indawo ekufuphi yaseNew Mexico apha .)
Kwiimeko ezininzi, oku kusimahla. Iindaba ezimnandi, akunjalo?
Ikopi yoqobo okanye eqinisekisiweyo yamaxwebhu akho ayimfuneko ukwenza olu tshintsho. Ukuba awukabinazo, oko kuthetha ukubacela kwiiofisi ezifanelekileyo, ke qalisa kule ASAP. Kuhlala kubiza imali encinci ukuyifumana.
Emva kokutshintsha kwegama lakho le-SSA, lixesha lokuba uhlaziye ipasipoti yakho (ukuba unayo). Oku kungathatha ngaphezulu kwenyanga, ke sicebisa ukuba uqalise nge-ASAP. Emva kwayo yonke loo nto, uza kuthini ukuba ufuna ukuthatha uhambo olungafakwanga ngexesha elithile kungekudala?
Imfusa kunye nelokhwe yomtshato yobukhulu
Le fomu uyigcwalisayo iya kuxhomekeka ekubeni koluphi kolu luhlu ungena kulo:
1. Ukuba ipasipoti yakho wakhutshwa ngaphantsi konyaka odlulileyo kwaye walitshintsha igama lakho ngelo xesha, uya kufuna kuphela ukulungiswa kwepaspoti . Ngale nto, thumela imeyile:
Ipaspoti yakho yangoku
Igama lakho elisemthethweni lokutshintsha uxwebhu
Ifoto yepaspoti yombala
2. Ukuba incwadana yakho yokundwendwela ikwimeko entle, wakhutshwa ubuneminyaka eli-16 ubuncinci, kwaye wakhutshwa kule minyaka ili-15 idlulileyo, kuya kufuneka Hlaziya ipaspoti yakho . Ngale nto, thumela imeyile:
3. Faka isicelo sepaspoti entsha ukuba incwadana yakho yokundwendwela ayingeni kwelinye lala maqela angentla. Ngale nto, kuya kufuneka undwendwele Isixhobo sokwamkela iPasipoti buqu ukuba ungenise:
Ubungqina besazisi, kubandakanya nefotokopi
Ubungqina bokuba ngummi, kubandakanya nefotokopi
Ngolwazi oluthe kratya malunga neentlobo ezahlukeneyo zeefom zokundwendwela, ndwendwela Ukuhamba.Ilizwe.Gov . (IHitchSwitch inokukunceda ubone ukuba yeyiphi na oyifunayo.)
Ukulungisa incwadana yokundwendwela simahla (woot). Ukuhlaziya incwadana yokundwendwela kubiza i-110 yeedola kwincwadi yokundwendwela (kunye / okanye eyi- $ 30 yekhadi), ngelixa ufaka isicelo sepasipoti entsha kubiza i- $ 110 kwincwadi yepaspoti, i- $ 30 yekhadi, kunye ne- $ 35 kwimirhumo eyongezelelweyo.
Soloko uqinisekisa ukuba igama lakho ekubekweni kohambo lifana negama lakho kwipaspoti yakho. Kungenxa yoko le nto abantu abaninzi abatshatileyo belinda kude kube semva komtshato ukuya kwiholide Qalisa utshintsho lwegama . Kungenxa yoko le nto abanye abantu bekhawulezisa inkqubo yepaspoti, ebiza iindleko intwana yemali eyongezelelweyo kodwa kufanelekile ukuba uthatha uhambo kungekudala.
Ukutshintsha igama lakho kwilayisensi yakho yokuqhuba yaseMexico kubalulekile ukuze igama lakho lihambelane nokwenzeka ukuba yeyona ndlela yakho ye-ID oyisebenzisa kakhulu.
Intloko kwindawo yendawo yaseNew Mexico MVD kwaye ubuze ukuhlaziya iphepha-mvume lakho ngegama elitsha. Ungafumana Uluhlu lweendawo apha . Kuya kulindeleka ukuba uze nayo ubungqina bokutshintsha kwegama (ewe, eso siqinisekiso somtshato okanye umyalelo wenkundla kwakhona). Kukutsalele indawo ukuze ufumane ulwazi oluthe kratya kwaye ubuze malunga nokuhlaziya isihloko kunye nokubhaliswa kwemoto ngelixa ukuyo.
Izipho ezilungileyo zokuhlamba umtshakazi
Nje ukuba ugqibile nge-SSA, incwadana yakho yokundwendwela kunye ne-MVD, uyakuhlaziywa zii-ID zakho ezinkulu ngegama lakho elitsha. Kodwa awuyi kuba ngokupheleleyo yenziwe ngotshintsho lwegama lakho laseMexico. Kuya kufuneka uhlaziye naliphi na iziko elinegama lakho elidala kwifayile.
Ngaba ukhathazekile uyalibala into? IHitchSwitch ilungile nakule. Inika abathengi bayo uluhlu lokutshekisha olwenziwe olwakho kunye nendlela yokwenza ngayo yonke into yokutshintsha igama lakho, ukhupha uqikelelo oluninzi kwaye ugcine abantu abatshatileyo uxinzelelo oluninzi.
Imifanekiso yepatio yamatye
unxibe unxibe umtshato wasehlotyeni
izimvo zomtshato ezincinci ezingezizo ezesiko
imibuzo yokubuza indawo yolwamkelo
Isiqithi sekhitshi esahlukileyo
UTom brady gisele bundchen umtshato